Ciidamada Galmudug oo Weerar ku qaaday Guriga Gudoomiyihii hore ee degmada Gadoon | Dayniile.com
Home Warkii Ciidamada Galmudug oo Weerar ku qaaday Guriga Gudoomiyihii hore ee degmada Gadoon
Wararka ka imaanaya caasimadda dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in booliska Galmudug ay Weerar ku qaadeen guriga guddoomiyihii degmada Gadoon ee gobolka Galgaduud Sheekh Cabdikariin Caabi Cali.
Wararka ayaa sheegaya in Gudoomiyihii hore ee degmada Gadoon ee gobolka Galgaduud uu ka tirsanaa maamulkii Ahlusunna, waxaana laga war helay abaabul Ciidan uu halkaas ka wado si uu xabad uga bilaabo Magaalada Dhuusamareeb.
Warar hor dhac ah ayaa sheegaya in Ciidamada Galmudug oo Wata gaadiidka dagaalka ay tageen guriga guddoomiyha oo ku yaalla deegaanka Gadoon, waxaana la sheegay in uusan joogin Xiligaas Guriga Gudoomiyaha.
Sidoo kale Galmudug wax faahfaahin ah kama bixin weerarka xalay ay ku galeen guryo ku yaalla Gadoon, oo uu lahaa Gudoomiyihii hore ee degmada Gadoon ee gobolka Galgaduud.
Previous articleWaan waan laga dhex bilaabay Mar kale Ahlusunna iyo Maamulka Galmudug
Next articleRaisal Wasaare Rooble oo sheegay in Kiiska ikraan Tahliil uu ku wareejiyay Xeer ilaaliyaha maxkamada Ciidamada
Taliyaha Ciidamada lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed Janaraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa ka hadlay xaalada dalka iyo doorashooyinka ka socda, waxaana uu Saraakiisha iyo...
Askari ka tirsan ciidamada dowladda oo weeraray axmaqnimo ah ku qaaday...